SAHAJ YATRA OFFER
अब Yeti Mob App मा आएको छ, सहज यात्रा अफर, जसअन्तर्गत् यहाँले Yeti Airlines को App / website बाट Flight Booking गरी यती एअरलाइन्ससँग यात्रा गर्दा Patho Bike Ride मा 20% र Carlite मा 50% (Rs. 175 सम्म)को छुट पाउनुहोस् । यो अफर Jan7, 2022 देखि पूर्ण रुपले ३ महिनासम्म लागू हुनेछ ।
Yeti Mob App बाट Flight Booking कसरी गर्ने ?
To get this Offer, one needs to:
Yeti Airlines को app वा website मा जानुहोस् |
Destination, Flight date, No of Travelers छनोट गरी Flight Search गर्नुहोस् |
आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरि यहाँले आफ्नो Preferred Payment Gateway मार्फत् भुक्तानी गरी टिकट बुक गर्नुहोस् ।
Ticket Confirmation सँगै SMS मार्फत् कार र बाइक दुवैको लागि Patho Discount Voucher Codes तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहोस् ।
आफ्नो आवश्यकताअनुसार Pathao App मार्फत् Ride बुक गर्दा सो Code को प्रयोग गरी तोकिएको डिस्काउन्ट तुरुन्तै अनि सजिलै पाउनुहोस्।
१) यहाँले अफरमा सहभागिता जनाउन Yeti Airlines को Official Website मा गएर Flight Booking गर्नु पर्नेछ ।
२) उक्त Codes सात दिनभित्रमा प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
नोटः यदि Codes प्राप्त गर्नुभएन भने आफ्नो Ticket Details सहित हाम्रो कल सेन्टर ०१ ५९७००७४ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि यती एअरलाइन्ससँग सहज यात्रा गर्नुहोस् ।